Maraykanka oo Jiritaanka Awoodeed ee Alshabab Ku Tuhunsan AMISOM – Radio Daljir
Maraykanka oo Jiritaanka Awoodeed ee Alshabab Ku Tuhunsan AMISOM
Luulyo 23, 2017 7:10 b 0
Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay howlgalka Midowga Afrika uu ka wado Soomaaliya ee AMISOM in uu sabab u yahay soo kabashada AL-shabaab.
Warbixin lagu daabacay Wargeyska Long war Journal ee ka soo baxa Mareykanka ayaa looga faallooday fashilka ku yimid howlgalka AMISOM ee Soomaaliya oo sababay in Al-shabaab ay helaan degaanno nabad ah oo ay ka qorsheeyaan Weerarrada ka dhanka ah Dowladda Soomaaliya,Kenya iyo AMISOM.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in gaabiska ku yimid howlggalada AMISOM ee ka dhanka ahaa Al-shabaab ay horseedday in Al-shabaab ay sameeyaan dib u kabasho iyo qabsashada degaanno hor leh oo ku yaalla bartamaha iyo Koofurta Soomaaliya.
2016kii howlgalka AMISOM waxaa uu ka gaabiyay dhamaan howlgalladii qorsheysnaa ee lagu doonayay in AL-shabaab looga saaro degaannada ay heystaan,taas waxaa ay sababtay in AL-shabab ay fuliyaa weerarro badan,sidoo kalena qabsadaan qeybo ka mid ah Gobollada koofureed ee Soomaaliya.
Degaannada AMISOM qorsheysay in lagala wareego Al-shabaab waxaa ka mid ahaa dhamaan degmooyinka Gobolka Jubada dhexe laakiin aan wali midna lagala wareegin.
Sidoo kale Al-shabaab waxaa ay hadda maamulaan Degmooyinka Jilib,Jamaame,Bu’aale iyo Saakow oo ka wada tirsan Gobolka Jubada dhexe,waxaa kale oo ay maamulaan qeybo kale oo ka mid ah dooxada Jubba sida Jubada hoose iyo qeyb ka mid Gobolka Gedo.
Warbixin sanadeedka Dowladda Mareykanka ee la dagaallanka Argagixisada ee sanadkii 2016kii ayaa Waregyska Long War Journal,waxaa uu ku sheegay in howlgalka AMISOM uu hoos uga dhacay sidii la filayay taas beddelkeedana ay ka faa’ideysteen Al-shabaab.
Sababa hoos u dhigay Howlgalka AMISOM waxaa ka mid ah sida lagu sheegay warbixinta xogyarida,xiriirka dadweynaha iyo iskaashiga reer galbeedka oo aan sidii la rabay ahayn.
2016;Al-shabaab waxaa ay qabsadeen dhulal badan,waxaana ay sameysteen degaanno nabdoon oo ay weerarrada ka qorsheyn karaan,akana abaabuli karaan,waxaa ay sidoo kale la wareegeen degaanno ay ka baxeen Ciidamada AMISOM sida kuwa Itoobiya ka midka ahaa.
Dowladda Soomaaliya ayey Wrabixintu sheegtay in Ciidamadeeda aysan hadda ku filneyn in AL-shabaab ay ka saaraan Soomaaliya,sidoo kale heerarka Caddaaladda,garsoorka iyo hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya ayaan gaarsiineyn heerkii laga doonayay.
Dowladda Federaalka ah waxaa ay wax xoogaa horumar ah ka sameysan fidinta Nidaamka Federaalka ah,waxaase uu gaabis kaga jiraa amniga iyo tatyeynta howlgallada ka dhanka ah Al-shabaab,waxaana 2016 Al-shabaab ay la kulmeen iska caabbin kooban oo dhanka goobihii ay weerareen ah.
Dib u dhacyo badan ayey AMISOM kala kulantay Al-shabaab kaddib markii ay dagaallo fool ka fool ah isaga hor yimaadeen,waxaana ay taas sababtay in Al-shabaab ay dib u qabsadaan degaannno kale.
Meelaha hadda la filayo in Al-shabaab ay qabsan karaan waxaa ka mid ah Degmooyin ku yaalla Gobollada Hiiraan,Bakool iyo meelo kale oo ka mid ah bartamaha Soomaaliya,waxaana sababay dib uga bixiddii Ciidamada Itoobiya ee ka baxay Soomaaliya gaar ahaan Gobollada dhexe,Hiiraan iyo Bakool.
Al-shabaab waxaa ay 2015-2017 fuliyeen weerarro cul culus oo ay ku qaadeen Saldhigyada Ciidamada AMISOM ku leeyihiin Soomaaliya,waxaana natiijada weerarradaas ay noqotay in ay ku dhintaan boqolaal ka tirsan Ciidamada AMISOM,goobaha lagu xasuusto ismuujinta AL-shabaab waxaa ka mid ah Leego,Jannaale,Ceel Cadde iyo Kulbiyoow.
Madaxweyne Cosoble, “Waxaan Ka Fekeraynaa Inaan Bedelno Magaca Hir-shabeelle”
Maxkamadda Sare oo Ka Jawaabtey Go’aankii Barlamaanka Soomaaliya